‘स्यालो कस्मेटिक’ सोंच फेरौं, अहिलेकै बजेटमा ४० प्रतिशत खर्च कटौति गर्न सकिन्छः डा. डिल्लीराज खनालको विचार
डा. डिल्लीराज खनाल २०७७ वैशाख २७ (May 9, 2020) मा प्रकाशित
सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पूनरावलोकन आयोगले योजना, बजेट, खर्च तथा वित्तीय व्यवस्थापनको विषयमा सरकारलाई सुझाव दिएको छ । अहिलेको बजेट प्रणाली खर्चमा आधारित छ । अहिले कुनै पनि क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन गर्दा त्यसबाट कति प्रतिफल दिन्छ भनेर हेरिँदैन । पहिला कति हुन्छ त्य अनुसार खर्च राख्ने अनि त्यसैमा आधारित भएर विनियोजन गरिन्छ ।
बजेट र खर्च प्रणाली उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने खालको छैन । केवल अनावश्यक र फजुल खर्च बढाउने तथा अर्थतन्त्रमा कुनै सकारात्मक प्रभाव नपार्ने खालको छ । अबका दिनमा बजेट प्रणालीमा सुधार गर्दै कार्यक्रम, परियोजना, चालू खर्च तथा त्यस भित्रका विभिन्न उपशिर्षकहरुमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने सुझाव सहित आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
उदाहरणका लागि अहिले चालू खर्चलाई कसरी खर्च गर्ने भन्ने कुनै मापदण्ड छैन । यसले गर्दा चालू खर्च बर्षेनी बढ्दै जाने र थोरै मात्रामा विनियोजन गरिएको पूँजीगत खर्च समयमा खर्च नहुने परिपाटी छ । बजेट वैज्ञानिक र परिणाममुखी नभएकाले पनि कहाँ कसरी खर्च भैरहेको छ त्यसको नियमन तथा अनुगमन गरिदैन । दुरुपयोग भएको अवस्थामा ठिक ढंगबाट नियन्त्रण गर्न पनि सकिएको छैन । बजेटको तेस्रो समस्या अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणमा छ । नतिजामा आधारित भन्दा पनि विशुद्ध झारा टार्ने खालको मात्र छ । जुन प्रभावकारी नै छैन । कहाँ दुरुपयोग भैरहेको छ, कसले जिम्मेवारी वहन गरेको छैन त्यहाँ तत्काल एक्सन लिएर कारबाही हुँदैन । कुनै अनुगमन पनि छैन ।
अर्को पाटो बजेटमा कुनै ठोस योजना विनै यो वा त्यो परियोजना र कार्यक्रम भनेर रकम विनियोजन गरिन्छ । संसारमा कुनै पनि देशमा यस्तो प्रचलन छैन ।सरकारले नागरिक प्रतिको दायित्व पुरा गर्न खर्च गर्नै पर्ने रकमलाई पनि परियोजना वा कार्यक्रम भनेर विनियोजन गरिन्छ । जसले गर्दा विकास निर्माणका ‘कोर’ आयोजनाहरुले प्राथमिकता पाएका छैनन्, सधै छायाँमा पर्छन । अहिले कुल बजेटको ९० प्रतिशत रकम विना प्राथमिकताका क्षेत्रमा विनियोजन भैरहेको छ । बजेटमा जुन किसिमको परियोजना तथा कार्यक्रममा रकम खर्च गर्ने परिपाटी छ त्यो नै गलत छ । यसलाई आधारभुत रुपमै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
अहिले विभिन्न बहानामा जतिपति समिति र कोष खडा गरिएको छ तीमध्येधेरैलाई खारेज गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय सार्वजनिक संस्थानमा खर्चको दायित्व बढ्दै गएको छ त्यसलाई सुधार गर्दै व्यापाक रुपमा कटौति गर्नुपर्छ । बजेटमार्फत कुन क्षेत्रमा खर्च गरिँदै आएको छ, त्यसमा सुधार गर्नुका साथै योजना तथा परियोजनाहरुलाई नयाँ तरिकाबाट वर्गिकरण गरेर कार्यान्वयनको पाटोमा पनि सुधार गर्नु जरुरी छ । खर्च प्रणालीलाई पनि चुस्त, परिणाममुखी र जवाफदेही बनाउँदै आम रुपमा सुधार गरी सोही अनुरुप नियन्त्रण र खर्च गरे लक्ष्य अनुसार प्रतिफल दिन सक्छ ।
सारमा भन्नुपर्दा अहिलेको बजेट खर्च प्रणाली वा परियोजना कार्यक्रम भनेर जसरी राखिँदै आएको छ त्यसको ठिक तरिबाट हिसाबकिताब गरेर पुनर्संरचना गर्ने मापदण्ड सहित अघि बढ्ने हो भने अहिलेको खर्चमा ४० प्रतिशत कटौती गर्न सकिन्छ । परिणाममुखी धेरै नयाँ कार्यक्रम तथा योजनाहरु कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ । यी भए मात्रात्मक सुधार ।
अर्को मुख्य कुरा खर्चमा आधारित बजेट प्रणालीलाई पुरै परिवर्तन गर्नुपर्छ । प्रतिफललाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । मापदण्ड बनाएर मात्र खर्च गर्नुपर्छ । जसरी विकासे बजेटमा चौमासिक विभाजन गरिन्छ, साधारण प्रकृतिका चालू खर्चमा पनि चौमासिक विभाजन गरेर समयसिमा तोकेर खर्च गर्नुपर्छ । उदाहणका लागि कुनै कार्यालयले बजेट बाँकी रहेमा अन्तिममा आएर फर्निचर तथा अन्य क्षेत्रमा भन्दै बर्षभरीको खर्च एकै पटक गर्दै आएका छन् । ठूलो रकम कुनै अमुक कार्यक्रम तथा भैपरी आउने शिर्षकमा विनियोजन गरेर राख्ने अन्तिममा रकमान्तर गरेर खर्च गरिँदै आएको छ । वित्तीय अनुशासन भएन ।
‘प्राथमिकताका आधारमा परियोजना छनौट गर्नुपर्छ । केन्द्रले होल्ड गरेका धेरैजसो आयोजनाहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्छ । साधारण खर्चमा निश्चित मापदण्ड लगाउनुपर्छ भने यो वा त्यो नाममा राखिएका सबै परियोजना खारेज गर्नुपर्छ । सांसद विकास कोषलाई खारेज गर्नुपर्छ । यसलाई मात्र खारेज गर्दा २५ देखि २६ अर्ब रुपैयाँ जोगिन्छ ।’
आयोगले माथिदेखि तल्लो तहसम्म ४० देखि ४५ हजार कर्मचारी कटौति गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएको छ । यो निरपेक्ष कर्मचारी होइन । १६ वटा मन्त्रालय राख्ने, देश संघीयतामा गइकेपछि केन्द्रमा धेरै विभाग तथा डिभिजन चाहिँदैन, विभिन्न नाममा यो वा त्यो कन्ट्रयाक्ट बनाएर खर्च गर्ने परिपाटी छ त्यसलाई पनि अन्त्य गर्नुपर्छ । जसले अहिलेको बजेटमा व्यापक रुपमा खर्च कटौती गर्न सकिन्छ ।
सरकारले प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेर क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजाने भनिएको थियो तर अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । प्रतिवेदनले खर्च व्यवस्थापनका विषयमा जुन खालको सुझाव दिएको थियो त्यसलाई अहिलेसम्म वेवास्ता गरिएको छ । तर कार्यान्वनयनमा ल्याउने बेला आईसकेको छ । पछिल्लो समय अन्य मुलुकले पनि७५ प्रतिशत क्रमागत कार्यक्रम कटौति गर्दै अहिलेको समस्या समाधान गर्नेगरी बजेट ल्याएका छन् । अहिले देशमा कोरोनाले जुन खालको संकट सिर्जना गरेको छ आयोगको सिफारिस अनुरुप बजेट ल्याउने हो भने त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्न सकिनेछ ।
जति बेला सुझाव दिएका थियौैं त्यसबेलाभन्दा कोरोनाका कारण प्राथमिकता फरक हुन सक्छन् । तर खर्च नियन्त्रण गर्ने र अहिलको प्राथमिकता अनुरुपका आयोजना ल्याउन मद्दत पुग्ने छ । अर्थमन्त्रीज्यूले यसै हप्ता मात्रै अर्थतन्त्रमा ३ खर्ब रुपैयाँको घाटा भैसकेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभएको छ । राजस्व उठेको छैन भने कोरोना भाइरसका कारण स्वास्थ्यमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वाधार छैन, प्रविधि क्षमता छैन भने हामीसँग स्रोत पनि छैन ।
बजेटमा स्रोत व्यवस्थापनको आधार
अहिले देशमा भित्रने रेमिटान्समा उच्च गिरावट आएको छ । केही बर्षयता हाम्रो राजस्व उठौति दर एकदमै राम्रो थियो । तर अहिले खुम्चिएको छ । विडम्बना नै भनौंउठेको राजस्वलाई गलत र परिणाम नआउने ठाउँमा खर्च हुँदै आएको छ । चालू वा फजुल खर्च व्यापक रुपमा बढ्दै जाने र न्युन रुपमा विनियोजन हुने पूँजीगत बजेट ठिक तरिकाबाट खर्च नहुने परिपाटी छ । अन्तिम समय वा असारमा आएर कुल पूँजीगत बजेटको ४० देखि ४५ प्रतिशत रकम खर्च हुँदा वित्तीय व्यवस्थापनमै प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ । यस्तो बजेटरी प्रणालीले भने अनुरुपको प्रतिफल दिन सक्दैन ।
अहिलेसम्म राजस्वको ठूलो हिस्सा जसरी खर्च गर्दै आएको छौं त्यसलाई पूर्णरुपमा परिमार्जन गर्नुपर्छ । यद्यपि केही न केही रुपमा राजस्व परिचालनलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । अहिले कोरोनाले सबैभन्दा बढी मार न्यून आय भएका तथा अल्पविकसित मुलुकहरु हुन । जो हरेक हिसाबले उच्च जोखिममा छन् । तसर्थ विदेशी सहायतालाई बढीभन्दा बढी परिचालन गर्नुपर्छ । बण्ड जारी गरेर पनि स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । हिजोका जुन विरासत अनुरुप बजेट घाटा वा आर्थिक स्थायित्वमा आधारित ‘स्यालो कस्मेटिक’ कुरा गरिन्थ्यो त्यस्ता सोचमा केही परिमार्जन गर्नुपर्छ । यो संकटको अवस्थामा कंक्रिट परियोजनामा खर्च गर्ने कार्यक्रम सहित घाटा बजेट ल्याउनुपर्छ । जुन परिपाटी अन्य देशमा पनि छ ।
अबको मुख्य प्राथमिकता भनेको मावन स्वास्थ्य हो । कोरोना महामारीलाई रोक्न ट्रयाकिङ, टेस्टिङ र ट्रिटमेन्ट हुनु जरुरी छ । हाम्रो कमजोर स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रणालीलाई व्यापक सुधार गर्दै क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने छ । यसमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन । अहिले लकडाउन तथा सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने कारणले गर्दा उद्योग व्यवसायमा समस्या देखिएको छ । सरकारले उद्योग व्यवसाय खुला गर्ने निर्णय गरेपनि तत्काल खुला गर्न सकिने स्थिती छैन । बोर्डरमा त्यतिकै मात्रामा नेपालीहरुको विचल्ली भएका छन् । जनता खाद्यान्न विहीन हुन नपरोस, भोकै नमरुन भन्नका लागि पनि खाद्य सुरक्षाका प्रत्याभुति हुनु जरुरी छ ।
‘अहिले थुप्रै देशहरुले अर्थतन्त्र जोगाउन ठूलो धनराशी राहतको रुपमा ल्याइसकेका छन् । हामीकहाँ एकदमै ढिला भैसकेको छ । यस अघि ल्याएका केही राहतका प्याकेज पनि एकदमै संकुचित खालको छ । अबका दिनमा सरकारले गर्ने लगानी र निजी क्षेत्रलाई रेस्क्यू गर्ने खालको हुनुपर्छ । समग्र अर्थतन्त्रलाईनै रेस्क्यू र रिभाईभ गर्ने गरी बजेट तथा कर र खर्च नीति ल्याउनु पर्छ ।’
अहिले जसरी वेरोजगारीको समस्या बढेको छ उनीहरुलाई रोजगारी पनि दिलाउनु जरुरी छ । गतबर्षदेखि हामीले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम ल्याएका छौं । त्यसलाई समेत आधार बनाएर जनतालाई खाद्यान्न, रोजगारी र न्यूनतम सामाजिक सुरक्षालाई एकिकृत रुपमा अघि बढाउनु पर्छ । अबका दिनमा अर्थतन्त्रलाई पुर्नजागृत नगरी अरु कुनै उपाय नै छैन । सरकारले जसरी राहतका कार्यक्रम ल्याउनु पर्दथ्यो त्यो अहिले सम्म ल्याउन सकेको छैन ।
अहिले थुप्रै देशहरुले अर्थतन्त्र जोगाउन ठूलो धनराशी राहतको रुपमा ल्याइसकेका छन् । हामीकहाँ एकदमै ढिला भैसकेको छ । यस अघि ल्याएका केही राहतका प्याकेज पनि एकदमै संकुचित खालको छ । अबका दिनमा सरकारले गर्ने लगानी र निजी क्षेत्रलाई रेस्क्यू गर्ने खालको हुनुपर्छ । समग्र अर्थतन्त्रलाईनै रेस्क्यू र रिभाईभ गर्ने गरी बजेट तथा कर र खर्च नीति ल्याउनु पर्छ । रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । अहिले विश्वनै महामारीबाट जकडिएको छ । सप्लाई तथा भ्यालु चेनहरु टुटेका छन् । अबका दिनमा अथतन्त्र जोगाउन आन्तरिक क्षमता बढाउनुको विकल्प नै छैन । जसका लागि तुलनात्मक लाभका क्षेत्र कृषि, साना तथा घरेलु व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्दै अन्य व्यवसायलाई पनिसँगै लिएर अघि बढ्नुपर्छ । अहिले पर्यटन क्षेत्र धराशयी भएको छ ।
यसरी सकिन्छ बजेट खर्च घटाउन
आयोगले जुन सुझाव दिएको छ त्यसलाई कार्यान्वयनमा मात्र ल्याउने हो भने अहिले हुँदै आएको बजेट खर्च ठूलो मात्रामा रोकिनेछ । खर्च कहाँ कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषय प्रतिवेदनले नै भनेको छ । हाल हुदै आएको बजेट खर्चलाई ४० प्रतिशत घटाएर प्राथमिकताका आधारमा परियोजना छनौट गर्नुपर्छ । केन्द्रले होल्ड गरेका धेरैजसो आयोजनाहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्छ । साधारण खर्चमा निश्चित मापदण्ड लगाउनुपर्छ भने यो वा त्यो नाममा राखिएका सबै परियोजना खारेज गर्नुपर्छ । सांसद विकास कोषलाई खारेज गर्नुपर्छ । यसलाई मात्र खारेज गर्दा २५ देखि २६ अर्ब रुपैयाँ जोगिन्छ ।
कृषि क्षेत्रमा कामै नलाग्ने परियोजनाका लागि बजेट विनियोजन भैरहेको छ । केन्द्रमा कार्यक्रममा छ कार्यान्वयन गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा छ । जस्तो सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम ल्याएको छ त्यो सुरु भयो या भएन स्थानीय तहलाई थाहा छैन । केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय तहले एउटै कार्यक्रम र शिर्षकमा बजेट खर्च गर्दै आएका छन् ।
(डा. खनाल अर्थशास्त्री तथा तत्कालीन संयोजक, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग)